Himalaya Dainik » यी एक अभिनेत्री जसको तस्विर जुम गरिगरि हेर्छन् सलमान !
यी एक अभिनेत्री जसको तस्विर जुम गरिगरि हेर्छन् सलमान !
बलिउडका चर्चित नायक हुन् सलमान खान । उनकाे चर्चा सामाजिक संजालमा निकै चर्चा भएका छन् । उनी बाहेक भिडियोमा वरुण धवन पनि अभिनय गरिरहेछन्। वरुण आफ्नो फिल्म स्ट्रिट डान्सर थ्रीडीको लोकप्रिय गीत नाचेका छन् । उमंग २०२० आइतवार सोनी टिभीमा जहाँ बलिउड र टिभी स्टारहरू उपस्थित हुनेछन् ।
पछिल्लो समय सलमान खानकी नायिका कट्रिना कैफको नाम विक्की कौशलसँग विगत देखि दुवैले एक अर्कालाई डेट गरिरहेको भन्दै जाेडिएकाे छ । यद्यपि यस बिषयमा दुबैले कुने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
बिक्कि कौशलो कट्रिनाभन्दा अघि हर्लेन सेठीसँग अफेयर थियो। हार्लिनसँग विक्कीको ब्रेकअपको खबर अप्रिल २०१९ मा आएको थियो । जसपछि कट्रिना नाममा जोडिन थालेको छ । हर्लिन र विक्कीको ब्रेकअपको कारण पनि कट्रिनालाई बताइएको थियो।
इंडिया टुडे वेबसाइटका अनुसार, हर्लिन सेठीले विक्कीसँग सम्बन्ध छोड्नुको कारण कट्रिना कैफ भएको बताएकी छन्। कट्रिना कैफ र विक्की कौशल अहिलेसम्म एकसाथ ठूलो पर्दामा देखा परेका छैनन्।
करण जोहरको शो ‘कफी विद करण’ मा कट्रिनासँग वरुण धवन पनि थिए। शोको बेला कट्रिनाले विक्कीसँग उनको जोडी पर्दामा राम्रो देखिने बताएकी थिइन् । पछि कट्रिनाले भनेको कुरा करणको शोमा पुगेका विक्कीलाई सोधिएको थियो। शोको क्रममा विक्किले कट्रिना कुरा सुनेर बेहोस भएको नाटक गरेका थिए ।
धेरैलालाई थाहा छैन यी ८ जोडी बलिउडकर्मीको रहस्यमयी प्रेमलीला